गर्भधारणका लागि कुन समय र आसनको यौन सम्पर्क उपयुक्त ? – ramechhapkhabar.com
गर्भधारणका लागि कुन समय र आसनको यौन सम्पर्क उपयुक्त ?
नव विवाहित जोडीकालागि पहिलो सन्तान जन्माउने प्रक्रिया चुनौती बनिदिन्छ । यसकालागि योजना अनुसार शिशुलाई जन्मदिने तयारीमा जुट्नु पर्दछ । शिशु जन्माउन आफ्नो आर्थिक अवस्था, बच्चाको लालनपालनकालागि आवश्यक कुराको व्यवस्थापन सु्निश्चित गरेर मात्र बच्चा पाउँदा ठिक हुन्छ । यद्यपि सबैको हकमा यो लागु नहुन सक्छ । कतिलाई कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कसरी गर्भ रहन्छ भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । यसकालागि तलका जानकारी उपयुक्त हुन सक्छ ।